သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်းက သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်​ငွေ - Nanmalgyi
အာရပ် နိုင်ငံ တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာ တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ချမ်းသာလဲ ဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံမှာတောင်းစားတဲ့ သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လ ဝင်​ငွေ ဟာ နိုင်ငံ အများစုမှာ ပညာရှင် အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေထက်တောင် များတယ်ဆိုရင် သင်ယုံနိုင်ပါ့မလား..?
တောင်းစားတဲ့သူတွေဟာ ဒူဘိုင်း ကို တရားဝင် ခရီးသွားဗီဇာနဲ့ ဝင်ရောက်လာကြပြီး အချိန်သုံးလအတွင်းမှာပဲ အကျိုးအမြတ်အများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ တောင်စားတဲ့နေရာမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်နေတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်လဝင်ငွေဟာ ဒူဘိုင်းငွေကြေး ၂၇၀,၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃,၅၀၀) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းတစ်ထောင်နီးပါး ဝင်ငွေရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ် သိန်းတစ်ထောင် ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်း ရှိရင်တောင် အရမ်းရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
တောင်းစားသူတွေဟာ လူတွေရဲ့ သနားကြင်နာ၊ ဂရုဏာသက်မှုတွေအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒူဘိုင်း နိုင်ငံသား တွေအပေါ် လုပ်စားနေတယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ရဲတွေအနေနဲ့ ဒါတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း မှာ တရားဝင်တောင်းစားခွင့်မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လိုက်လံတောင်းစားနေသူတွေက သာမန်မြင်တွေ့နေကျ သူတောင်းစားတွေမျိုးမဟုတ်ပဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ခေါ်ရမယ့်သူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တစ်ခါတောင်းရင် တစ်ဆယ် တစ်ရာမျိုးတောင်းတာမဟုတ်ပဲ အနည်းဆုံး ဒူဘိုင်းငွေ တစ်ထောင် (ဒေါ်လာ ၂၇၀) လောက်က စတောင်းပါတယ်၊ သနားပြီး အမှန်တစ်ကယ် ပေးသွားတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ အလုံးရင်းနဲ့ ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတွေအနနဲ့ သူတောင်းစား နှိမ်နင်းရေးကို လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအသွင် ခပ်စိပ်စိပ်လုပ်ဆောင်လာပြီး ပြီးခဲ့နှစ်က ပထမဆုံးတစ်ရက်ထဲမှာတင် ၆၅ ယောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ခရီးသွားဗီဇာ သုံးလဖြင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အာရပျ နိုငျငံ တှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ဒူဘိုငျးနိုငျငံဟာ ခမျြးသာ တဲ့ နိုငျငံဖွဈတယျဆိုတာ အားလုံးသိထားပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘယျလောကျတောငျခမျြးသာလဲ ဆိုရငျ သူတို့နိုငျငံမှာတောငျးစားတဲ့ သူတောငျးစားတှရေဲ့ တဈလ ဝငျ​ငှေ ဟာ နိုငျငံ အမြားစုမှာ ပညာရှငျ အဖွဈလုပျကိုငျနသေူတှရေဲ့ တဈနှဈဝငျငှထေကျတောငျ မြားတယျဆိုရငျ သငျယုံနိုငျပါ့မလား..?
တောငျးစားတဲ့သူတှဟော ဒူဘိုငျး ကို တရားဝငျ ခရီးသှားဗီဇာနဲ့ ဝငျရောကျလာကွပွီး အခြိနျသုံးလအတှငျးမှာပဲ အကြိုးအမွတျအမြားကွီးရှိနကွေပါတယျ။ တောငျစားတဲ့နရောမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျဖွဈနတေဲ့ သူတောငျးစားတဈယောကျရဲ့ တဈလဝငျငှဟော ဒူဘိုငျးငှကွေေး ၂၇၀,၀၀ (အမရေိကနျဒျေါလာ ၇၃,၅၀၀) မွနျမာကပျြငှေ သိနျးတဈထောငျနီးပါး ဝငျငှရှေိနပေါတယျ။ မွနျမာပွညျမှာ တဈနှဈ သိနျးတဈထောငျ ဝငျတဲ့ဝနျထမျး ရှိရငျတောငျ အရမျးရှားမယျထငျပါတယျ။
တောငျးစားသူတှဟော လူတှရေဲ့ သနားကွငျနာ၊ ဂရုဏာသကျမှုတှအေပျေါ အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ဒူဘိုငျး နိုငျငံသား တှအေပျေါ လုပျစားနတေယျလို့ အှနျလိုငျးမှာ ဖျောပွမှုတှရှေိခဲ့ပွီး ရဲတှအေနနေဲ့ ဒါတှကေိုရှငျးလငျးဖို့ ပွောဆိုတာတှရှေိခဲ့ပါတယျ။
အခုဆိုရငျ အာရပျနဲ့ အာရှဂိုဏျးအဖှဲ့တှကေ နိုငျငံထဲကို လူတှခေျေါသှငျးလာပွီး တောငျးစားခိုငျးကာ ပွနျလညျခေါငျးပုံဖွတျမှုတှရှေိနကွေောငျး သတငျးရငျးမွဈအခြို့က ရေးသားကွပါတယျ။
ဒူဘိုငျး မှာ တရားဝငျတောငျးစားခှငျ့မရှိပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ လိုကျလံတောငျးစားနသေူတှကေ သာမနျမွငျတှနေ့ကြေ သူတောငျးစားတှမြေိုးမဟုတျပဲ ပရျောဖကျရှငျနယျလို့ ချေါရမယျ့သူမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှဟော တဈခါတောငျးရငျ တဈဆယျ တဈရာမြိုးတောငျးတာမဟုတျပဲ အနညျးဆုံး ဒူဘိုငျးငှေ တဈထောငျ (ဒျေါလာ ၂၇၀) လောကျက စတောငျးပါတယျ၊ သနားပွီး အမှနျတဈကယျ ပေးသှားတာတှေ ရှိနတေဲ့အတှကျ သူတို့တှရေဲ့ ဝငျငှဟော အလုံးရငျးနဲ့ ဖွဈနတောဖွဈပါတယျ။
ရဲတှအေနနဲ့ သူတောငျးစား နှိမျနငျးရေးကို လှုပျရှားမှုတဈခုအသှငျ ခပျစိပျစိပျလုပျဆောငျလာပွီး ပွီးခဲ့နှဈက ပထမဆုံးတဈရကျထဲမှာတငျ ၆၅ ယောကျဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ပွီး အမြားစုမှာ ခရီးသှားဗီဇာ သုံးလဖွငျ့ တရားဝငျ ဝငျရောကျလာသူမြားဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
သူ့စကားကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဆို့နစ်သွားတယ် သားက အမေစားလို့မကုန်တာမှစားပါတယ် တဲ့ 😞 သိတတ်လိုက်တာ